होमपेज / नागरिक शनिबार / गल्फर उद्योगपति
गल्फर उद्योगपति	22 Jun 2013 ८ असार, २०७०
व्यावसायिक क्षेत्रमा कमाएको नामबाट प्रदीपकुमार श्रेष्ठ जति खुसी छन्, व्यापारको जालोमा फस्दै गएपछि प्रिय खेल फुटबलबाट बाहिरिनु परेको सम्झँदा अहिले पनि दुःखी हुन्छन्। फुटबल खेलाडीका रूपमा स्थापित हुन उनले पढाइसँग सम्झौता गरे, परीक्षासँग सम्झौता गरे। केले आकर्षित गर्‍यो थाहा छैन, तर बाल्यकालदेखि नै उनी 'फुटबल क्रेजी' थिए। जन्मथलो इलामको फिक्कल बजारमा प्राथमिक शिक्षापछि जब उनी दार्जिलिङको नर्थ प्वाइन्ट स्कुल भर्ना भए, 'फुटबल फिभर' झन् बढ्यो। उनी स्कुलको क्याप्टेन भए। 'सायद फुटबलमा त्यसरी प्रगति गर्ने म पहिलो नेपाली विद्यार्थी थिएँ,' पुल्चोकको पञ्चकन्या भवनमा गफिँदा उनले आफूलाई 'स्पोर्टी' स्थापित गर्न निकै कोसिस गरे। 'परीक्षा सकाउनेबित्तिकै मैदान जाने, मैदानबाट सिधै परीक्षा हलमा आउने त कति भयो कति! मेरो परीक्षामा स्कुलले खेल सारेको उदाहरण पनि धरै छन्,' कलेज पढ्दाको फुटबल लतले उनलाई कति समातेको थियो भने जाडो विदामा घर (झापाको शनिश्चरे) आउँदा पनि क्लब खोलेर फुटबल खेल्न भ्याउँथे। ...दार्जिलिङमा बिकम गरेर काठमाडौं आएपछि पनि उनी खेलबाट न अलग्गिन सके, न जम्न नै। 'फुटबल निश्चित उमेरभित्रै स्थापित भइसक्नुपर्ने खेल हो, ढिलो काठमाडौं छिर्नाले यसमा मैले प्रगति गर्न सकिनँ,' उनलाई अहिले पनि थकथक लाग्छ। त्यसो त पूर्वमा कहलिएका व्यापारी (प्रेमबहादुर श्रेष्ठ)का छोरालाई राजधानी आउन केले छेक्यो त? त्यतिखेर (२०३२ साल) काठमाडौंको अमृत क्याम्पस पढ्ने धोको बोकेर आएका थिए, उनी। तर, एसएलसीको ६२ प्रतिशतले भर्ना प्रक्रियामा तगारो हाल्यो। 'खै, नम्बर मात्र हो कि सोर्सफोर्स नपुगेको हो, अस्कलमा नाम निस्किएन। त्यसैले दार्जिलिङ पढ्न जानुपर्‍यो,' उनी त्यहाँको फुटबलमा अब्बल त साबित भए। तर, काठमाडौंमा जस्तो व्यवसायिक माहोल पाएनन्। मास्टर्स गर्न उनी काठमाडौं आए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइ, जावलाखेल क्लबमा फुटबल। काठमाडौंमा फुटबल खेल्ने अधुरो चाहना पूरा गर्न त खोजे, दत्तचित्त भएर लाग्न भने पाएनन्। पढाइ र बाबुको व्यापार बढ्दै जाँदा फुटबलको ज्वरो घट्दै गयो। 'अफिसमा पियनदेखि एकाउन्टेनसम्मको काम आफैंले भ्याउनुपर्ने भयो, अंग्रेजी जान्ने भएकाले टाइपिस्ट पनि आफैं,' विस्तारै उनको दैनिकी बदलियो, '५ बजे उठ्यो, चिसो पानीमा नुहाएर फ्रेन्च भाषा सिक्न गयो, १ बजे विश्वविद्यालय, मःम खान मासाङ गल्ली, राति १० बजेसम्म अफिसको काम सघाउनुपर्ने।' बौद्ध र मासाङ गल्लीमा मःम खान जाने उनका साथीमा थिए किशोर महर्जन, मिनेन्द्र रिजाल, किशोरचा आदि। ...'अब बिहे गर्नुपर्छ,' घरका सबैले प्रदीपलाई करकर गर्न थाले। दाइले बिहे गरिसकेका थिए, पढाइ सकिन लागेको थियो। त्यसैले उनीसँग 'गर्दिन' भन्ने कारण रहेन। खेलसँग प्रेम थियो। पे्रमिका खोज्ने समय नै पाएका थिएनन्। सिधै मागी विवाह भयो। 'बुवाको साथीले कुरा ल्याउनुभयो। फोटो हेरें राम्रो लाग्यो, भेट्यौं मनपर्‍यो,' काठमाडौंमा कहलिएका व्यापारी गणेशभक्त श्रेष्ठकी माइली छोरी उषाकिरणसँग उनको विवाह भयो। हुनेवाला श्रीमती कानुनमा स्नातक गर्दै छिन् भन्ने सुन्दा सुरुमा उनलाई डर पनि लागेको थियो। 'कानुन पढ्नेहरू कडा हुन्छन् भन्ने सुनेको थिएँ, उषा त निकै नम्र रहिछिन्,' बिहे गरेपछि उनले थाहा पाए। विवाहपछि प्रदीप झन् व्यस्त भए। उद्योग र व्यापारका नयाँ–नयाँ योजनाले उनलाई छोप्दै लग्यो। झापाको 'पञ्चकन्या राइस मिल'को जगमा सुरु भएको उद्योगले ठूलो फड्को मारिसकेको थियो। पञ्चकन्या काष्ठ उद्योग फलामे छड र डण्डी उद्योगमा परिवर्तन भयो। 'अवस्था सुहाउँदो उद्योग'को परिकल्पनामा प्रदीप व्यस्त हुँदै गए। ...अखबार, चिया वा टेलिभिजनको हेडलाइनससँग सुरु हुँदैन उनको दैनिकी। खेलकुद अहिले पनि उनको अभिन्न छ, मात्र खेल फेरिएको छ। फुटबलको सट्टा गल्फमा रत्तिएका छन्। ६ बजे नै कोर्स पुग्छन्। बिहानको ताजा हावा र हरियो कोर्समा दुई घन्टा बिताएपछि मात्र देश–दुनियाँतिर ध्यान दिन्छन्। दुई घन्टाको खेलबाट दिनभरिलाई पुग्ने ऊर्जा मिल्ने ठान्छन्।उनी काठमाडौंका गोकर्ण गल्फ क्लब, रोयल नेपाल गल्फ क्लब र त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबका सदस्य हुन्। 'फुटबल मोह गल्फतिर कसरी सर्‍यो?''फुटबल उमेरमा खेलिन्छ, गल्फमा यस्तो कुनै परिधि छैन। नमरुन्जेल खेल्न सकिन्छ,' उनी भन्छन्। गल्फलाई 'एलिट गेम' भनेको उनलाई उति मन पर्दैन। 'गल्फलाई महँगो खेल ठान्ने धेरै छन्, तर यो कति लाखको गाडी चढ्ने भने जस्तै हो। गल्फलाई आफ्नो हैसियतमा झारेर खेल्न सकिन्छ,' प्रदीप अर्थ्याउँछन्। यति एयरका आङछिरिङ शेर्पा, फोटो पत्रकार गोपाल चित्रकार, रविन्द्रमान श्रेष्ठ, टेण्डी शेर्पालगायतको समूहसँग प्रदीपको गल्फ जम्छ। खेलमा प्रतिस्पर्धाको भावना प्रचुर हुन्छ भन्छन्। बेलाबेलामा बाजी पनि थाप्छन्, खेललाई अलि गम्भीर बनाउन। तर, जसले जित्छ उसैले ख्वाएर सकाउने त्यहाँको चलन छ। गल्फ खेल्न उनी विदेशका विभिन्न मुलुक पुगेका छन्। तर, त्यसलाई खेलभन्दा बढी घुमिफिरको रूपमा सदुपयोग गरेका छन्। खेल्न गएको मौकामा गन्तव्यबाट नजिकका नयाँ देश पुग्न र परिवार लैजान उनी भुल्दैनन्। 'वर्षमा १२ दिन छुट्टी मिलाउँछु, स्वदेश/विदेशको यात्रा गरिन्छ,' भारतका तिर्थस्थल रामेश्वरम्, तिरुपति बालाजी, कलकत्ताको काली मन्दिर, पुरीलगायतका क्षेत्रले उनलाई आकर्षित गरेको छ।उनी आफ्नो र परिवारको जन्मदिनको विशेष ख्याल राख्छन्। 'तर, पाँचतारे होटलमा भोज गरेर मनाउने चलन छैन,' जन्मदिन मनाउने शैली सुनाउँछन्, 'बिहान मन्दिर त्यसपछि असहाय बालबालिकालाई खाना खुवाउन भैंसेपाटी जान्छौं। उनीहरूसँगै खान्छौं। १० वर्ष भयो यसरी मनाउन थालेको, उनीहरूलाई पनि हाम्रो परिवारको जन्मदिन याद हुन थालिसक्यो।'प्रदीप हरेक आइतबार आफ्ना बाबु–आमालाई भेट्न जान्छन्। शुक्रबार सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने दिन। शनिबार परिवार र गल्फलाई ज्यादा। अरू दिन अफिसको कामबाट फुत्किन पाउँदैनन्। ....बजारमा नाम छ। मानिसले सजिलै चिन्छन्। प्रदीप ठान्छन् सायद सफल हुने भनेको यही होला। 'कसरी यत्तिको भइयो?' भन्नेलाई उनी एउटै कारण बताउँछन्– आत्मविश्वास। 'म ठान्छु, अरूले गर्न सकेको काम म पनि सक्छु। घर र अफिसमा मेरो नेतृत्व चल्छ, अरूको पछि लाग्ने स्वभाव छैन,' उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्। विदेशका प्रगति देख्दा 'नेपालमा यसलाई यसरी विकास गर्न सकिन्छ' भन्दै उनले अरूको सोचलाई आफ्नो माटो सुहाउँदो बनाएका छन्। उनको 'इन्टरप्राइजिङ आइडिया' आफ्नो समुदायमा लोकप्रिय बन्छ। संगीत उनको रुचि हो तर सुन्न र गुनगुनाउन मात्र। नारायणगोपालका फ्यान। पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली संगीतले गरेको उन्नति उनलाई उम्दा लाग्छ। उनी ठान्छन्– संगीतमा सौख छ, साथ छैन। 'संगीतको रुचि पूरा गर्न भर्खरै घरमा एउटा समान ल्याएको छु, नामचाहिँ खुलाउँदिन,' उनी त्यसले आफूलाई संगीतमा साथ दिनेमा ढुक्क छन्। उपन्यास पढ्नुलाई समयको बर्बादी ठान्ने उनी साहित्यमा उत्ति रुचि राख्दैनन्, 'फिक्सन पढ्न समय र स्वभाव छैन।' वर्षमा परिवार र साथीहरूसँग एकदिन तास खेल्छन्। मौका मिलाएर निकै जम्ने उनको सर्कल थियो, धेरै नाति–नातिनी खेलाउन व्यस्त हुँदा संगत टुट्दै गएको छ। १५ वर्षदेखि 'गल्फ ग्यादरिङ' नै नजिकको समुदाय बनेको छ। ....उद्योगी/व्यापारीलाई धनी ठानिन्छ। 'हो, मलाई पनि मनिसहरू खुब धनी ठान्छन्, तर यो आंशिक सत्य हो। धन हुनेलाई मात्र धनी भन्ने हो भने यहाँका धेरै व्यापारी गरिब छन्,' उनी धनी र ऋणीको परिभाषा बुझाउँछन्, '४० वर्षअघि मेरो थाप्लोमा एक पैसा पनि ऋण थिएन। काम बढाउँदा बैंकसँग ऋण लिनुपर्छ, आफ्नो पुँजीले मात्र सकिँदैन। त्यसैले ऋण पनि छ। अब म धनी कि ऋणी?'उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भइसकेका उनी उद्योगी/व्यवसायीको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्। 'मेरो धन भनेको त्यही नाम हो। विद्याजस्तै त्यो पनि कसैले चोर्न सक्दैन, भौतिक धनको त के ठेगान!' व्यापारीले धनको अर्थ यसरी लगाए। Tweet Leaveacomment Message *
यसपालि त मनै फाट्योभक्तपुर-भक्तपुर, मूलढोकाकी मीना अवालले अघिल्लो वर्ष मात्र छोरा गुमाइन्। उनका तीन वर्षीय छोरा रोहितको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो। दुई छोरीले आमालाई सम्झाएपछि जसोतसो मन बाँधेकी थिइन्। यसपाला त उनको...	जीवनभर रङको सहाराघरका भित्ताभरि सुन्दर चित्र झुन्डिएका छन्। कोठाभित्रको दराज किताबै किताबले भरिएको छ। कोठाको एकछेउमा गितार, अर्कोतिर क्यानभास। त्यही क्यानभासमा रङ मिसाउँदै छन्, कलाकार टेकवीर मुखिया।	‘उहिले भकारी ओईरिन्थ्यो,अहिले ‘दाना’ झर्दैन’सारंगीको तार चुडीएको महिनौ भैसक्यो । तुलसीपुर रक्षाचौरका कबिराम गन्धर्व (६५)का औँलाले सारंगीमा चाल मार्न छोडीसके । घरको तलामा झुण्ड्याईएको थोत्रो सारंगीको तार ‘फेर्न’कबिरामलाई मन छैन अब । ‘तार फेरेर...	अमिलो लप्सीको गुलियो कथासाँगा, काभ्रे — चार दशकअघिसम्म काभ्रेपलाञ्चोक नासिकास्थानमा अमिलो हुँदैन थियो। मकै, कोदो, धानलगायतका परम्परागत खेतीपातीले जीविका धान्न नसक्दा यहाँका किसानको मन ‘अमिलो' हुन्थ्यो। त्यही समयमा तुलसीलाल दुवालले पहिलोपटक अमिलोको व्यापार...	नतानु त तानु लाग्ने हुक्काहुक्काको हुइयाँ !!चुरोटको सर्को कहिल्यै नतानेका पछिल्लो पुस्ताका प्रायः युवाले हुक्का तानिसकेका छन्। खासमा हुक्का नेपाली संस्कृति वा पहिचान होइन। इतिहासअनुसार यसको उत्पति पाँच सय वर्षअघि पर्सियामा भएको हो। पछि...	वागमती लहरले उठेर बर्सिदेऊ...पानी.....पानी.....पानीवागमती लहरले उठेर बर्सिदेऊ.....पानी.....पानी.....पानी	एप्पल ट्रेलताप्लेजुङका नरेन श्रेष्ठले मुस्ताङबाट फर्किंदा ताजा स्याउ, स्याउको सुकुटी र स्याउकै ब्रान्डीले झोला भरे। भदौ दोस्रो साता उनी मुस्ताङ यात्रामा निस्कँदा पहिलो बास मार्फा गाउँमा बसेका थिए। नाम सुन्दैमा पनि...	नौली— धन्दा नमान यार सोहन। अरे, यार कहिलेकाहीँ त मोज गर।— मोज रे। हामी पढ्न आएका कि मोज गर्न? — पढाइ! पढाइ!! पढाइ!!! हैन कति गर्ने पढाइ? — पढ्न मन...	नागरिक शनिबार	एउटा पुरानो छापामार'हान्ने राँगोजस्तै भएर आइस् नि? आँखा पनि राता न राता छन्! के भो तँलाई ए शंकर?'फलैँचामा...	दुइटा नाक भएका मान्छेम उनलाई सम्झाइरहेको थिएँ, छोरीको बिहामा फजुल खर्च गर्नु हुन्न।मेरो कुरामा सहमति जनाउँदै ती वुज्रुगले भने,...	मेरो रंगयात्रामा सर्वनामतीस–एकतीस सालतिरको धनकुटा। गोकुण्डेश्वर हाइस्कुलको सानो हलमा नियमित नाटक मञ्चन गर्थ्यौं। टिकटमा नाटक मञ्चन हुने परम्परा...	भाषिक अव्यवस्थाकुनै गलत कुरालाई धेरै पटक दोहोर्यािएर सत्य प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रयासमा कतिपय मानिस लागिरहेका हुन्छन्। यहाँ...	भर्खरै...